Izaho ao amin'ny Sans
Ny mahatsiaro tsy misy fahatsapana dia I.
Vol. 5 JULY, 1907. Tsia
I AMIN'NY SOSO.
MAHITA SY MOMBA ary maheno sy mahita ary mahatsapa; Miaina ao anaty fahatsapana isika, miasa amin'ny eritreritra, mieritreritra amin'ny alalan'ny saina ary matetika mamantatra ny tenantsika amin'ny retsi-pihetsika, saingy tsy dia manontany tena isika hoe ny niandohan'ny fahatsapantsika, na ny tsy maha-mipetraka ny mponina azy. Mijaly sy mankafy, miezaka ary manandevo isika mba hanome sakafo sy fahafinaretana ny saina; mieritreritra isika ary manomana sy miasa amin'ny fanatanterahana ny faniriantsika ary tsy mahatsikaritra fa mifamatotra amin'ny eritreritra ireo faniriana ireo ary izahay dia mpanompon'izy ireo. Manangana idealy izay mifototra amin'ny fahitana mahatsikaiky. Ny idealy dia lasa sampy sy mpanompo sampy. Ny fivavahantsika dia fombam-pihetseham-po, izay mahatsapa ny andriamanintsika. Mamorona na misafidy ny andriamanitra misy antsika isika araka ny fepetran'ny saintsika. Manome azy ireo ny toetran'ny fahatsapana isika, ary manompo am-pahatsoram-po amin'ny alàlan'ny fomba fisainantsika. Isika dia ampianarina sy atokantsika araka ny fahaizantsika sy ny fahazavan-tsika amin'ny vanim-potoana iainantsika; fa ny kolontsaintsika sy ny fanabeazana dia natao mba handoavana hetra sy hajaina amin'ny fomba amam-pahaizana amin'ny kanto sy etetika, ary araka ny fomba siantifika. Ny siansa antsika dia siantifika. Manandrana mampiseho fa hevitra tsy misy dikany fotsiny ny hevitra ary ireo tarehimarika ireo dia noforonina mba hahazoana tombotsoa sy hampiasaina mba hahazoana ny fahafinaretana sy ny fifaliana amin'ny fahatsapana amin'ny vanim-potoana iainantsika.
Miala amin'ny eritreritra isika dia tokony hosoratana sy hidirana amin'ny tontolon'ny fisainantsika; Tokony homana, manao zavatra, miaina ary maty isika tahaka ny biby eo amin'ny tontolon'ny fisainantsika. Saingy misy ny "izaho" izay mpandefitra amin'ny fahatsapana-izay miankina amin'ny fahatsapan'ny fihetseham-po ny fihetseham-po - ary na dia ny sainy aza no tompony ankehitriny, dia hisy andro iray hisintonan'ny "izaho" hiala amin'ny ditrany ary hitsangana sy hanary ny rojon'ny fahatsiarovana. Hamarana ny fe-panandevozany izy ary hitaky ny zony masina. Amin'ny fahazavany izay manazava azy dia hamafa ny herin'ny haizina izy ary manala ny glamoratry ny fahatsapana izay nanajamba ary nanipy azy ho fanadinoana ny fiaviany masina. Hangina izy, hametraka, hananatra, ary hampivelatra ny saina ho amin'ny fahaiza-manao ambony ary ho lasa mpanompony vonona. Avy eo dia ny "Izaho" dia ho mpanjaka mpanjaka masina miaraka amin'ny rariny, fitiavana ary fahendrena manerana izao rehetra izao.
Ny "Izaho" dia hahalala avy eo amin'ny faritra ao ambadiky ny sain-kevitra, izay loharano mitondra ny zava-drehetra, ary ho mpandray anjara amin'ilay fisehoan-javatra tsy azo ivalozana fa ny tena izy amin'ny zava-drehetra-kanefa izay nohajambaintsika tsaina, tsy mahatsiaro.
Manomboka amin'ny fiandohan'ny an'izao tontolo izao, ny singa iray miavaka dia miavaka, ary amin'ny endriny iray, ny duality, dia maneho ny asan'ny fanahy. Ny hery sy ny asan'ny fanahy no mamokatra. Izany no mahatonga ny tontolo iray tsy misy endrika. Ao anatin'ny fanararaotana dia mamoaka ny singa ho toy ny fiaran'izy ireo ny hery. Ny hery tsirairay dia manana fiara mitovy aminy. Ity fiara na singa ity dia fanehoana lehibe ny hery. Izany dia ny ampahany miandany amin'ny heriny, toy ny toe-tsaina sy ny toe-tsaina-toe-tsaina no misy ny birao mifanohitra amin'izany. Ny hery sy ny singa rehetra dia tsy miseho atsy am-piandohana any am-piandohana, fa tsy miseho afa-tsy eo amin'ny sehatra ahafahany mamokatra ny fepetra fanehoana. Misy hery fito, miaraka amin'ireo fiara mifandraika aminy, singa fito. Izy ireo dia manerana izao tontolo izao sy ny fivoarany. Ny zodiaka dia maneho io fironana sy evolisiona io amin'ny alalan'ny famantarana fito avy amin'ny homamiadana (♋︎) amin'ny alàlan'ny libra (♎︎) amin'ny kapikirana (♑︎). Ao am-piandohan'ny vanim-potoana voalohany (fihodinana) amin'ny fisehoan-javatra, fa ny hery iray dia maneho ny tenany sy ny singa manokana. Ity singa ity taty aoriana dia natao ho fitaovana amin'ny fanehoana ny hery faharoa ihany koa amin'ny singa faharoa. Isaky ny vanim-potoana (boribory) dia misy hery sy singa fanampiny miseho. Ny tontolo misy antsika amin'izao fotoana izao dia efa nandalo fe-potoana telo lehibe toy izany ary ankehitriny amin'ny fahefatra. Ny vatantsika dia vokatry ny fampidirana ireo hery sy ireo singa izay miseho ary miharihary. Amin'ny vanim-potoana fahefatra dia ny fiodinana amin'ny resaka evolisiona.
Amin'ny alalan'ny fampidirana ireo singa, dia novolena ireo vatana izay mifandray amin'ny singa sy ny alalan'ireo singa ampiasaina. Ireo singa ireo dia tafiditra ao anaty vatana ary lasa saina amin'ny vatana voaomana. Ny fahatsapantsika dia ny fanangonana miaraka sy ny fampidirana ireo singa ho lasa vatana. Ny fahatsapana tsirairay dia mifamatotra amin'ny ampahany manokana amin'ny vatany izay ampahany ny taova sy ny foibe manokana izay mahatonga ny hevitra ho avy amin'ny singa mifanaraka aminy ary amin'ny alalan'io no maneho ny singa amin'ny heviny. Izany no nahatonga ny singa firehan-kevitra, rivotra, rano ary tany; Ary ny fahadimy dia lasa evolisiona toy ny eter. Ny fahatsapana fahenina sy fahafito dia izao, ary mbola tokony hivoatra amin'ny alalan'ny taova sy mifanentana ao amin'ny vatana. Ny hery miasa amin'ny singa afo, rivotra, rano, ety sy ethera dia hazavana, herinaratra, ny herin'ny rano izay mbola tsy manana anarana siantifika, magnetisme ary feo. Ny fahatsapana mifanaraka amin'izany dia: fahitana (afo), fihainoana (rivotra), famoandrano (rano), fofona (tany), ary manohina na mahatsapa (ether). Ny taova, ny sofina, ny lelany, ny orona ary ny hoditra na ny molotra ny taova amin'ireo singa ireo ao an-doha.
Ireo singa manan-danja amin'ny tafik'izy ireo dia fikambanana, fa tsy zavatra tsy misy korontana. Izy ireo dia tafangona ary miray hina mba hamokarana ny vatan 'ny olona amin'ny heviny.
Saika ny endriky ny biby tsirairay dia mahazo fahatsapana dimy, fa tsy mitovy amin'ny an'ny olombelona. Ny fahatsapana ao amin'ny biby dia mifehy sy mifehy amin'ny singa mifandraika aminy, saingy amin'ny olombelona, ​​ny "I" dia manohitra ny fanaraha-maso manontolo amin'ny alalan'ny singa. Ny fisainan'ny biby dia toa manintona kokoa noho ny an'ny olombelona. Izany dia satria tsy mifanohitra amin'ny ataon'ireo singa ny singa rehefa manatanteraka ny biby, ka noho izany dia ny biby no tarihina kokoa amin'ny singa. Ny fahatsapan'ny biby dia mahatsapa fotsiny ny singa mifanaraka aminy, fa ny "I" amin'ny olombelona dia manontany ny fihetsiky ny sainy rehefa miezaka ny mitantara azy ireo amin'ny tenany, ary toy izany dia miseho ny fisafotofotoana. Ny fanoherana tsy dia kely loatra ny "I" dia manolotra ny sain-kevitra izay mahatsapa fa ny tena izy dia ny tarika hitarika ny saina, fa raha ny tarika no mitarika ny olona amin'ny heviny, dia kely saina sy tsy tompon'andraikitra izy. Ny olona akaiky kokoa ny toetran'ny olona dia miaina mora kokoa ny mamaly azy ary tarihin'ny natiora amin'ny alalan'ny eritreriny. Na dia afaka mahita sy mandre kokoa aza ny olom-boafidy ary ny fofona sy ny tsirony dia manjavozavo eo amin'ny tsipika voajanahary, kanefa tsy afaka manavaka ny loko sy ny lokon'ny loko izy, izay hitany sy ankasitrahan'ny artista amin'ny fijeriny, ary tsy afaka manavaka ny fahasamihafana amin'ny tonony sy ny firindrana izy izay fantatry ny mpihira, na tsy manana ny lamosin'ny tsiro izay nambolena ny epikorea na ny tehezan'ny tehezina manam-pahaizana, ary tsy afaka mahita ny fahasamihafana sy ny habetsahin'ny fofona izay afaka manitsy ny fofony mahatsikaiky.
Ny olombelona dia mamolavola fahatsapana fahenina izay tsy ananan'ny biby. Izany no toetra na fahamendrehana ara-môraly. Ny fahatsapana ara-môraly dia manomboka mifoha ao amin'ny lehilahy voalohany ary lasa fotony lehibe kokoa satria ny olona dia manatsara ny fiompiana sy ny fanabeazana. Ny singa mifanaraka amin'io heviny io dia tsy azo raisina ho an'ny olombelona na dia eo aza izany, fa ny herin'ny fampiasany amin'ny alalan'ny fahatsapana ny toetrany sy ny fitondran-tena dia heverina fa ny fisainan'ny olona dia miaina ao anatin'ny sain'ny olona ny tena "I" izay ny fahafito fahafito, ny fahatsapana ny maha-izy azy, ny fahatakarana sy ny fahalalana.
Ny tantaran'ny tontolo misy antsika taloha, ny fampidirana ireo singa amin'ny natiora sy ny biby rehetra, dia novatsiana indray tamin'ny fananganana vatana. Ny fampidirana ireo singa dia mifarana amin'ny fahaterahana ary manomboka ny fivoaran'ny toe-tsaina. Ny fampivoarana tsikelikely ny fahatsapana amin'ny sokajin-taonan'ny lasa dia afaka mandalina tsara indrindra amin'ny fitandremana amim-pitandremana ny maha-olombelona, ​​hatramin'ny fahaterahana ka hatramin'ny fifindrana tanteraka amin'ny maha-olombelona azy. Fa ny fomba tsara kokoa sy tsotra kokoa amin'ny fianarana ny fomba fampivoarana ny saina dia ny hiverina amin'ny fotoan'ny fahatanorantsika ary hijery ny fivoaran'ny toe-tsaintsika sy ny fomba nampiasantsika azy ireo.
Ny zazakely dia zavatra mahafinaritra; Ny zava-manan'aina rehetra dia tsy mahafa-po indrindra. Ny fahefan'ny tany rehetra dia voantso mba hanampy amin'ny famoronana ny vatana kely; Tena misy "Vata masin'i Noah" izay ahitana ny endri-piainana rehetra sy ny zavatra rehetra. Ny biby, ny vorona, ny trondro, ny biby mandady ary ny voan'ny fiainana rehetra dia natao ao anatin'izao tontolo izao. Kanefa, tsy toy ny biby hafa, ny zazakely iray dia mila fiahiana sy fiarovana tsy tapaka mandritra ny taona maro, satria tsy afaka manome na manampy azy. Ilay bibikely kely dia teraka eto amin'izao tontolo izao nefa tsy mampiasa ny sainy; fa amin'ny fanamafisana ny fandrenesana azy amin'ny fahatongavany sy ny fitandremana.
Tsy teraka akory ny zaza rehefa teraka. Tsy afaka mahita, na mandre, na manandrana, na manimbolo, na mahatsiaro. Tsy maintsy mianatra ny fampiasana ny sainy tsirairay izy ireo, ary manao izany tsikelikely. Ny zazakely dia tsy mianatra ny fampiasana ny sainy amin'ny lamina mitovy. Amin'ny fihainoana voalohany dia tonga aloha; miaraka amin'ny hafa, mahita aloha. Amin'ny ankapobeny, amin'ny ankapobeny, ny zaza dia tsy misaina afa-tsy ao anatin'ny nofinofy tsy misy dikany. Ny fahatsapana tsirairay dia misokatra toy ny fahatairana, vokarin'ny fahitana na fandrenesana voalohany, izay entin'ny reniny na ny mpanatrika iray. Ny objet no manjelanjelatra ny maso, ary tsy misy zavatra mahavariana mihitsy. Ny feon'ny reniny dia re avy amin'ny tabataba na feo hafa izay mampitony ny taova momba azy. Tsy afaka manavaka fofona izy ary tsy afaka manandrana. Ny fikarakarana sakafo dia avy amin'ny bitsika avy amin'ny selan'ny vatana, izay vava fotsiny sy vavony, ary tsy mahatsapa amin'ny fahamatorana na ny toerana misy ny vatany. Amin'ny voalohany dia tsy afaka manakatona ny tanany amin'ny zavatra rehetra izy, ary manandrana mamahana ny tenany amin'ny totohondry. Izay tsy hitan'ny maso dia tsy maintsy ho jerena amin'ny tsy fahafahany mampifantoka ny mason'ny zavatra rehetra. Tsy maintsy mampianatra azy ny renim-pianakaviana mba hahita sy handre izany, rehefa mampianatra azy haka sakafo. Amin'ny teny sy fihetsika miverimberina dia manandrana manintona ny sainy izy. Amin'ny faharetana dia mijery ny mason'io renirano io ny reniny noho ny fanehoana fankasitrahana, ary mandalo herinandro na volana mialohan'ny alahelony ny fony amin'ny tsikitsiky manaitra. Raha vao mahavita mamantatra feo izy dia manosika ny ratsiny kely haingana, saingy tsy afaka mahita ilay feo. Amin'ny ankapobeny ny toerana misy ny feo dia tonga ny fahatsapana ny fahitana rehefa misy zavatra mamirapiratra manjelanjelatra eo anoloan'ny masony na ny sintominy dia voasarika amin'ny zavatra iray. Ny mpijery mpanara-maso izay nanaraka ny fampivelarana ny zazakely dia tsy mahomby amin'ny fahitana ny zavatra ataony raha toa ka ampiasaina araka ny tokony ho izy ireo sainy ireo. Raha toa ny feo ampiasaina amin'ny firesahana aminy dia hafana sy mahafinaritra dia hitsiky, raha henjana sy tezitra dia hitomany miaraka amin'ny tahotra. Ny fotoana izay ahitan'ny voalohany ny zavatra iray dia mety ho takatry ny fijerin'ny mpamaritra mifandraika amin'ny zavatra manintona azy. Amin'izao fotoana izao dia hitombo ny maso hifantohana tsara; Amin'izao fotoana izao, raha oharina amin'ny mahita ny maso dia tsy mifantoka. Azontsika atao ny mamantatra ny ankizy raha mahita sy mihaino amin'ny iray amin'ireo kilalao tiany indrindra izy. Raha mihozongozona ny fihokoana isika ary mihaino izany ilay zaza nefa tsy mahita, dia haninjitra ny tanany amin'ny làlana rehetra izy ary hitifitra an-kerisetra, izay mety tsy ho eo amin'ny fitarihana ny fihokoana. Izany dia miankina amin'ny fahafaha-mahita ny feo. Raha mahita ny fikiakiahana dia hampifantoka ny masony amin'ny fingadahy izy ary hahatratra izany. Ny zavatra ataony na tsy hitany dia aseho amin'ny fanehoana tsikelikely ny fihokoana amin'ny maso ary manaisotra azy indray. Raha tsy mahita izany, dia hanolotra fikolokoloana ny maso. Fa raha hitan-dry zareo fa hiova amin'ny fifantohany izy ireo, arakaraka ny akaiky sy ny halavirana mankany amin'ny fihomehezana.
Ny fanandramana dia ny fahatsapana manaraka. Amin'ny voalohany dia tsy afaka mampiseho ny safidiny ho an'ny rano na ronono na siramamy na sakafo hafa izay tsy tena manelingelina na mandratra ny sela ao amin'ny vatana. Haka ny sakafo rehetra izy io, saingy amin'ny fotoana dia mampiseho ny safidiny amin'ny iray hafa amin'ny alalan'ny fitomaniana azy rehefa mihintsana tampoka ilay sakafo. Noho izany, ohatra, raha misy vatomamy iray napetraka ao am-bavany dia hitomany raha esorina ny siramamy ary tsy hampiononina amin'ny tendrony na ronono. Fa ny fisainany dia mety hesorina amin'ny fahatsapany tsiro amin'ny alalan'ny fanakorontanana fihobiana na fandihizana zavatra marevaka eo anoloan'ny masony. Ny fahatsapan'ny fofona dia tsikaritry ny mpanatrika amin'ny fanehoana fofona sasany, ny safidiny izay hiseho amin'ny tsikitsiky, ny mitsonika, na ny koko zaza.
Ny fahatsapana dia mivoatra miandalana sy mihatra amin'ny hafa. Saingy mbola tsy nianatra ny hasin'ny elanelana ilay zaza. Hahatratra ny volana na ny sampana mitambolimbolin'ny hazo iray izay manana fahatokiana be loatra rehefa hahatratra ny oron'ny reniny na ny volombavin'ny rainy. Matetika dia hitomany izy satria tsy afaka mahazo ny volana na zavatra hafa lavitra; Nefa mianatra tsikelikely ny lanjan'ny halavirana. Tsy mianatra mora foana anefa ny fampiasana ny taova, satria miezaka ny mamahana ny tongony na ny feony na ny kilalao izy. Hatramin'ny taona maromaro dia tsy hitsahatra ny hametraka ny zava-drehetra ao anatin'ny vava.
Ny fahatsapana dia eo am-piandohan'ny fiainana mifehy ny singa toy ny biby. Saingy amin'izao fahatanorana voalohany izao dia tsy mivoatra ny eritreritra; Fa, na dia misy karazan-java-manan'aina aza izay tsy mahazatra ny fitsipika tsotra dia tsy manomboka ampiasaina amin'ny faharanitan-tsaina ny fahatsapana mandra-pahatongan'ny taonan'ny fahamaotiana; dia manomboka ny tena fampiasana ny saina. Izany dia ny fahatsapana ara-môraly, ny fahatsapana ny toetra maha-olona, ​​ary ny hevitry ny olona rehetra dia misy dikany hafa amin'izao fotoana izao amin'ny fampandrosoana azy ireo.
Satria misy hery izay miasa amin'ny fiarany, ny singa, dia misy ihany koa ireo fitsipika izay mifandray sy miasa amin'ny alalan'ny eritreritra sy ny taova. Tany am-piandohana dia ny afo voalohany, ny hery voalohany maneho dia fahazavana izay niasa tamin'ny fiara sy ny singa, afo. Ao am-piandohan'ny olombelona ny fahazavana toy ny afo eo amin'izao rehetra izao dia ny saina, izay, na dia ao amin'ny endrika voalohany indrindra aza no voalohany indrindra, dia ahitana ny mikorontana ny zavatra rehetra tokony hivoatra ary mametraka ny fetran'ny fandrosoana . Ny fahatsapany dia ny fahitana ary ny taova ny maso, izay famantarana ihany koa.
Avy eo dia ny fiasan'ny hery, ny herinaratra, amin'ny alàlan'ny singa fototra amin'ny rivotra. Amin'ny olombelona ny fitsipika mifanaraka amin'izany dia ny fiainana (prana), miaraka amin'ny fihenan'ny sofina mifanaraka aminy, ary ny sofina toy ny taova. Ny herin'ny "rano" dia miasa amin'ny alalan'ny elanelany ny rano, ary manana ny torolalany amin'ny endrika (astral vatana na linga sharira), miaraka amin'ny dikany, ny tsirony, ary ny taova ny lela.
Ny tanjaky ny magnetism dia miasa amin'ny alalan'ny tontolon'ny latabatra, ary manana ny fitsipika sy fahatsapany mifanaraka amin'ny olombelona, ​​ny firaisana (vatana ara-batana, sthula sharira) ary ny fofona, amin'ny orona toy ny taova.
Ny herim-pon'ireo haino aman-jery amin'ny alalan'ny eterany. Amin'ny olombelona ny fitsipika mifanaraka amin'izany dia faniriana (kama) sy ny fahatsapany fahatsapana, amin'ny hoditra sy molotra toy ny taova. Ireo fahatsapana dimy ireo dia mahazatra ny biby sy ny olona, ​​fa amin'ny ambaratonga samihafa.
Ny fahenina fahenina dia ny fahatsapana manavaka ny biby amin'ny olombelona. Ny hevitra dia manomboka, na amin'ny zaza na amin'ny lehilahy, amin'ny fahatsapana ny hoe I-am-ness. Ao amin'ny zaza dia aseho rehefa tonga ilay antsoina hoe "tena mahatsiaro tena" ilay zaza. Ny zaza voajanahary, toy ny biby na ny maha-lehilahy voajanahary, dia tsy misy dikany amin'ny fomba amam-panaony, ary tsy matahotra sy matoky ny fitondran-tenany. Raha vao mahatsiaro tena izy, dia very ny valiny voajanahary momba ny sainy amin'ny endrik'izy ireo ivelany, ary mahatsiaro ho voasakantsakana noho ny fahatsapany I.
Rehefa mijery ny lasa dia tsy mahatsiaro ireo fanaintainana sy sazy maro nataon'ilay lehibe izay nahatonga ny fahatsapana ho ahy. Ny mahafantatra kokoa ny maha-izaho ahy, ny fanaintainana bebe kokoa dia hiteraka ny fandaminana mahomby. Izany dia maneho amin'ny ankapobeny ilay zazalahy na tovovavy vao mahatratra ny fahatanorany. Avy eo dia ny fahenina fahenina, ny fitondran-tena na ny fahatsapana ny toetran'ny olona, ​​dia voaporofo fa noho izaho teo aloha dia mifandray kokoa amin'ny vatana noho ny teo aloha. Amin'izao fotoana izao, ny fitsipiky ny eritreritra dia manatanteraka amin'ny heviny, ny fahatsapana ara-môraly na ny toetrany. Amin'io heviny io dia ny endriky ny maha-izy azy fotsiny, ny saron-tava I, ny fo diso. Ny maha-maha-olona ahy na ny fitsipiky ny saina tanteraka, mifanaraka amin'ny ezaka voalohany avy amin'ny saiko mba hanehoana ny heviny voalohany, ny maso, miaraka amin'ny hery mifandraika amin'ny hazavana sy ny singa misy azy.
Ny sainy dia aseho amin'ny zodiaka. Raha misy marika famantarana ny homamiadan'ny marary (♋︎) amin'ny kapikirana (♑︎), ny maso eo amin'ny loha dia eo amin'ny tsipika marindrano ao amin'ny zodiaka izay mampizarazara ny saha ho any ambony sy ambany. Ny ampahany ambony amin'ny zodiaka na loha dia tsy miseho, fa ny antsasaky ny hodi-tady na head kosa dia ny fisehoana sy maneho ny antsasany. Ao anatin'io antsasaky ny fisehoana ambany io dia misy fisokafoana fito, izay manondro ivontoerana fito, saingy amin'ny fotoana izay dia misy sivana dimy ihany no miasa.
Ireo fitsipika notononin'i Mme. Ny blavatsky amin'ny fampianarana teôsofika, ny vatana ara-batana (sthula sharira), ny vatana astral (linga sharira), ny fitsipika fiainana (prana), ny fitsipiky ny faniriana (kama), ny saina (manas). Ny fitsipiky ny saina (manas) dia avy amin'ny Mme. Nilaza i Blavatsky fa ny fitsipi-pitenenana manokana izy io, izay hany tokana nolazaina taminy fa mandrakizay, ary ny fitsipika tsy mitongilana izay maneho ny tenany ao amin'ny olombelona. Ireo fitsipika ambony dia mbola tsy miseho, ary noho izany dia miseho ao amin'ny tapany ambony amin'ny zodiaka; fa raha ny fitsipiky ny fisainana dia ny fisehoan-javatra eo amin'izao rehetra izao sy ny olombelona, ​​ny famantarana ny zodiaka dia mampiseho ny fomba amam-piainana ity fitsipika ity amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny fitsipika ambany kokoa, amin'ny lamina voajanahary amin'ny fandrotsahana ny evolisiona. Noho izany, ohatra, ny fofonaina voalohany, kansera (♋︎), dia manala ny mikorontana ny fiainana, leo (♌︎), izay mihamitombo tsikelikely amin'ny endriny, virgo (♍︎), ary endrika inona no voafaritra amin'ny firaisana ara-nofo sy ny fahaterahana, libra (♎︎). Ny firaisana ara-nofo dia aseho amin'ny fampandrosoana ny fitsipiky ny faniriana, scorpio (♏︎). Eto am-pamaranana ilay lehilahy ara-batana irery ihany. Saingy misy ny fahatsapana anatiny, toy ny fahamaizinana sy ny klairaudience, izay mifanaraka amin'ny fahitana sy ny fihainoana. Ireo, amin'ny fahaiza-manaon'ny saina, dia manana ny taolany sy ny toerany eo amin'ny antsasaky ny lohany. Ny saina sy ny fahaiza-manaony dia tsy maintsy ampiharina sy mivoatra alohan'ny hanatanterahana ireo fitsipika ambony (atma sy buddhi).
Ny olombelona dia manomboka ny fahatsapana fahenina amin'ny toetrany sy ny fitondran-tena izay mitarika na tarihin'ny saina, sagittary (♐︎). Satria ny saina dia lasa fitondran-tena tsy miangatra, ary ampiasaina amin'ny fomba mahomby ny fahatsapana ary ampiasaina amin'ny fampiasana tsara, ny hevitra fa ny toetra sy ny fisaintsainana ny izaho dia mifanaraka amin'ny tena I, ny maha-olona na ny saina, izay ny famitana ny ny fahatsapana amin'ny fiantsoana ny hery ambony kokoa ao an-tsaina. Ny taova izay hita taratra amin'ny toetrany ary ny fomba fijery ny fitondran-tena dia ao anatin'io sokajy io izay aseho amin'ny vatan'ny pitipoa. Ny taova maneho ny maha-izy azy, ny capricorn (♑︎) no fihinan'ny jabora. Toy ny taova dia napetraka eo anelanelan'ny maso ny afon'ny pitipika. Ny jirofo dia kely dia kely ary ambonin'izy ireo. Ny maso dia maneho ireo taova roa ireo izay mitoetra ao ambadik'ireny.
Ireo fahatsapana ho antsika ireo dia ny fanatanterahana ny foibe na ny taova eo an-doha no tsy loza fotsiny, na ny vintana - ny evolisiona amin'ny tontolo iainana. Izy ireo dia samy mandray sy ny tobim-pifandraisana izay ahafahan'ny mpandinika, lehilahy, mandray torolalana, ary mifehy na mitarika ny hery sy ny singa amin'ny natiora. Tsy tokony hoheverina koa fa ny famantarana ny zodiazy dia ny anaran'ny antoko sasany any an-danitra. Ny antokon-kintana any an-danitra dia marika toy ny planeta misy antsika. Ny famantarana ny zodiazy dia maneho fampianarana sarobidy be na baolina marobe. Ny lohan'ny kilasy tsirairay na ny filaminana dia zava-masina loatra ny faharanitan-tsaina mba hahatonga antsika tsy hilaza afa-tsy amintsika. Avy amin'ny fahagagana lehibe toy izany dia mandroso tsikelikely amin'ny filaharan'ny filaminana ny hery rehetra sy ny singa izay mamorona ny vatan'ny olona, ​​ary ny tsirairay toy izany dia manana ny taratasiny ao amin'ny vatan'ny olona araka izay voalaza.
Ny fahatsapana dia miavaka amin'ny tena izaho ary tsy mety voamarina amin'izany. Rehefa mifandray amin'ny vatana aho dia manala azy ireo ny saina, maneso azy ireo, manosika azy io ary manipy felam-boninkazo manodidina azy, izay tsy maharesy loatra. Tsy voatery ho tsapan'ny eritreritra aho; Tsy azo itokisana izany ary tsy azo ekena. Rehefa tonga eto amin'izao tontolo izao izy ary mifandray amin'ny fahatsapana dia mamantatra ny tenany amin'ny sasantsasany na ny sainy rehetra izy, satria ao anatin'ny tontolo ara-batana amin'ny endrika izay tsy misy na inona na inona mba hampahatsiahy azy, ary dia tsy amin'ny fotoana maharitra ny fijaliana sy ny fandehanana maro dia manomboka mamantatra ny tenany fa tsy mitovy. Saingy amin'ny ezaka ataony mba hanavahana ny tenany dia vao mainka mihamangy sy malahelo kokoa izy.
Ao amin'ny toetry ny ankizy na ny olon-dehibe dia manana ny fampiasana voajanahary ny sainy, saingy amin'ny toy izany dia tsy afaka ny hamantatra ny tenany. Tamin'ny alalan'ny fambolena sy ny fanabeazana no nahatonga ny ratsam-batana ho fampiroboroboana ambony kokoa. Izany dia aseho amin'ny sampana isan-karazany. Ohatra, ny mpanao sary sokitra dia mazavazava kokoa ny endrika sy ny ampahany ary mamolavola ny tanimanga plastika na manamboatra ny marbra mafy ho lasa endrika manakaiky ny hatsarana izay eritreretin'ny sainy. Ny mpanakanto manana loko mena dia manofa ny masony hahita sy ny fitsipiky ny fisainany mba hitady ny hatsarana tsy amin'ny endriny fa amin'ny loko ihany. Hitany ny fahasamihafana amin'ny loko sy ny lokon'ny loko izay tsy mahazatra akory ny olon-tsotra, ary ny lehilahy na ny printsy voalohany dia tsy mahita afa-tsy ny lokon'ny lokony mifanohitra amin'ny siramamy hafa. Na ny lehilahy fanabeazana tsotra fotsiny amin'ny fijerena ny tarehy iray dia mahita ny fifandimbiasana, ary mahazo ny fahatsapana ankapobeny amin'ny loko sy ny endri-javatra. Avy amin'ny fijerena akaiky azy no ahitany ny zavatra tsy azony atao amin'ny anarana hoe aloky ny loko; Fa ny mpihira tsy vitan'ny hoe tonga tampoka fotsiny amin'ny loko, fa afaka mahita ny loko maromaro amin'ny hoditra izy, izay tsy voatery ho tonga amin'ny olon-tsotra. Ny hatsaran-tarehin'ny tontolon'ny tarehimarika novokarin'ny mpanao asa tanana iray dia tsy nankasitrahan'ny olon-tsotra, ary hita taratra amin'ny tantaram-pitiavana avy amin'ny lehilahy na ny lahimatoa. Ny biby dia tsy miraharaha ny loko, fa raha ny tena izy dia izy no faly. Ny zaza na ny olon-dehibe dia tokony hozarina tsara mba hahatakarana ny hevitra momba ny lokon'ny loko sy ny fomba fijery amin'ny sary hosodoko. Tamin'ny voalohany dia sary hoso-doko iray izay maivana na maizina ao amin'ny faritra sasany, ny sary hoso-doko, fa ny saina tsikelikely dia mankasitraka ny aloha sy ny anton-javatra misy ny zavatra sy ny tontolo iainana mandalo, ary rehefa mianatra ny hankasitraka ny loko ny tontolo miseho maneran-tany . Ny ankizy na ny olon-tsotra dia mahafantatra ny feo avy amin'ny fahatsapana na ny fihetseham-po entiny. Avy eo dia manavaka ny tabataba sy ny mozika tsotra. Mety hampiofana tsara kokoa ny feo any aoriana any, fa ny mozika tena izy ihany no afaka manavaka sy mankasitraka ny tsy fitovian-kevitra amin'ny fandresen-dahatra ao anatin'ny tarika lehibe iray.
Fa ny glamourera izay vokatry ny fambolena ny saina dia mamatotra azy bebe kokoa amin'ny saina, ary mampitombo kokoa ny andevo noho ny hatramin'izay. Noho ny tsy fankasitrahany ny mpanompony mpankatò azy, dia lasa andevo sy kolontsaina tsy mivadika izy ireo, na dia eo aza ny fanabeazana sy ny kolontsaina dia manakaiky ny fotoana fifohazana izy.
Ny sasantsasany amin'ireo fahatsapana dimy ireo dia avo na ambany raha araka ny fampiasana azy manokana avy amin'ny toetra. Ny kolikoly sy ny fanabeazana dia mamatotra ny saina amin'ny saina raha toa ka hampiharina amin'ny endriny ara-nofo ny fahafaha-misaina sy ny fahaiza-mandanjalanja ary ny fananako ahy eto amin'izao tontolo izao sy ny eritreretiny ho fananany. Ny fahantrana, ny fahantrana, ny alahelo, ny aretina, ny alahelo, ny fahoriana isan-karazany, dia manipy ny tenako ary miala amin'ny fanoherany izay manintona sy mamongotra ny I. Raha vao matanjaka aho dia manomboka miady hevitra momba azy. Avy eo dia azo atao ny mianatra ny dikany sy ny fampiasana ny eritreritra. Avy eo dia mianatra izy fa tsy avy amin'ity izao tontolo izao ity, fa mpitondra hafatra manana iraka eto amin'ity izao tontolo izao ity. Izany aloha vao afaka manome ny hafany sy ny fanatanterahany ny iraka dia tsy maintsy mahafantatra ny saina tahaka ny tena izy izy ireo, ary mampiasa azy ireo araka ny tokony hampiasany fa tsy ny famitahana sy ny fanaraha-maso azy ireo.
Ny zavatra nianarako dia ny hoe ny saina dia tena mpandika ny an'izao tontolo izao, ny ahy, ary ny tokony homena azy ireo, fa ny tsy maintsy ianarako ny fitenin'izy ireo amin'ny heviny, ary hampiasa azy ireo toy izany. Raha tokony hampihetsi-po ny fitaoman-dry zareo izy ireo dia fantatro fa amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny sain-dry zareo ihany no ahafahana mandika an'izao tontolo izao amin'ny alalany, ary noho ny fifehezan'izy ireo, izaho, dia manao adidy amin'ny fanomezana endrika ny tsy fantatra ary ny fanampiana amin'ny raharaha amin'ny fisitrihana sy ny evolisiona. Mbola fantatro bebe kokoa fa ao ambadik'ireo singa izay itenenany amin'ny alalan'ny eritreriny dia misy ny faharanitan-tsaina sy ny fanabeazana izay mety hifampiresahany amin'ny alalan'ireo fahaiza-manao vaovao sy tsy ampiasaina izay tonga ary azo avy amin'ny fampiasana sy ny fanaraha-maso ny vatany saina. Rehefa mivoatra ireo fahaiza-manao ambony (toy ny fahatsapana sy ny fanavakavahana) dia maka ny toeran'ny fahatsapana ara-batana.
Ahoana anefa no hahafantarako sy hahafantarako ny tenako? Ny dingana izay ahafahana manao izany dia lazaina tsotra fotsiny, na dia ho an'ny maro aza dia mety ho sarotra ny ho tanteraka. Ny dingana dia fomba fiasa ara-tsaina ary ny dingan'ny fanafoanana. Mety tsy azo atao izany indraindray, na dia azo atao aza izany raha mitohy ny ezaka.
Avelao hijanona mangina sy hampihenana ny masony ny olona izay mahomby amin'ny fanafoanana ny fahatsapana. Avy hatrany, dia hisy fiantraikany ao an-tsainy ny eritreritry ny karazan-javatra rehetra momba ny fahatsapana. Avelao izy hanomboka tsotra izao ny fanafoanana ny iray amin'ireo lafin-javatra, lazao ny fofona. Avelao izy hanapaka ny fahatsapana tsiro, mba tsy hahatsiaro na inona na inona azony atao amin'ny fofona na tsiro. Avelao izy hanohy hanilika ny fahatsapana fahitana, izay midika fa tsy hisaina amin'ny fomba fisainana amin'ny endrika na loko izy. Avelao izy hanafoana ny fahatsapana fihainoana, mba hahafantarany tsy misy feo na feo, na dia ny tabataba eo amin'ny sofina aza, na ny fandefasana ny ra amin'ny vatany. Avelao izy hanohy avy hatrany amin'ny fanesorana ny fahatsapana fahatsapana rehetra ka tsy mahatsiaro ny vatany izy. Hitranga ankehitriny fa tsy misy hazavana na loko ary tsy misy zavatra hita eo amin'izao rehetra izao, fa very ny tsiron'ny tsiro, very ny fahatsapana fofona, mba tsy henoina eto amin'izao tontolo izao ary misy tsy misy fahatsapana fihetseham-po.
Ho lazaina fa ny olona iray izay tsy mahalala ny fahatsapan'ny maso, ny sofina, ny fanandramana, ny fofona ary ny fahatsapana dia tsy misy intsony, fa izy no maty. Marina izany. Tamin'izany fotoana izany dia maty Izy, ary tsy misy izany, fa amin'ny toerana misy ny maha-eo azy dia manana ny maha izy Azy, ary raha tokony hanana fiainana mamy izy dia izy.
Ireo izay mijanona tsimoramora aorian'ny fahatsapana dia nesorina. Ao anatin'io fotoana fohy io, ny olombelona dia manazava amin'ny fahatsiarovan-tena. Fantany ny maha izaho ahy, tsy mitovy amin'ny fahatsapana. Tsy haharitra ela izany. Hahatsiaro indray ny saina izy, amin'ny eritreritra, amin'ny alalan'ny saina, fa ho fantany kosa ny momba azy ireo, ary hitondra ny fahatsiarovana ny tena zava-misy aminy miaraka aminy izy. Mety hiasa miaraka amin'ny eritreritra izy amin'ny fotoana izay tsy hiankinany intsony amin'ny andevony intsony, fa ho azy irery ihany, dia ho eo foana aho amin'ny fifandraisana amin'ny saina.
Ny olona matahotra ny fahafatesana sy ny fizotran'ny fahafatesana dia tsy tokony hiditra amin'izany fomba fanao izany. Izy dia tokony hianatra kely ny toetry ny fahafatesana sy ny fizotrany ara-tsaina alohan'ny hikatsahana azy.